Cuadrado Oo Si Rasmi Ah U Wareejiyey Garanka Lambar 7 Oo Uu Xidhan Doono Cristiano Ronaldo | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Cuadrado Oo Si Rasmi Ah U Wareejiyey Garanka Lambar 7 Oo Uu Xidhan Doono Cristiano Ronaldo
(13-7-2018) Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa sii diyaarisay wax kasta oo Cristiano Ronaldo uu uga baahan yahay ka hor inta aanu si rasmi ah uga degin magaalada Turin ee aanu ku biirin ciyaartooyada kale ee samaynaya tababarka isku-diyaarinta xili ciyaareedka cusub.
Tallaabadii ugu dambaysay ee ay Juventus qaadday ayaa ah inay Cuadrado ku amartay inuu bixiyo funaanadda lambarka 7 oo uu xili ciyaareedkii u dambeeyey xidhnaa, waxaana ay kooxdu go’aamin doonaa lambarka cusub ee uu u xidhan doono mar haddii laga qaaday kiisii hore.
Sida uu qoray wargeyska Marca, Juan Cuadrado ayaa ka hor intii aanay kooxdu u sheegin inuu soo wareejiyo lambarka 7, waxa uu iskii ugu dhowaaqay inuu siinayo Ronaldo, waxaana uu sidaas ku baahiyey bartiisa bulshada ee Instagram.
Hadal kooban oo uu ku qoray bartiisa Instagram ayaa waxa uu soo raaciiyey garanka lambar 7 oo Cristiano Ronaldo dhabarka kaga qoran yahay, taas oo uu ku tilmaamay inay wanaagsan tahay inuu siiyo CR7.
“Waxa wanaagsan in la siiyo oo uu helo. Waxaan ku faraxsanahay imaatinka Cristiano Ronaldo.” Sidaas ayuu Cuadrado yidhi.
Si kastaba ha ahaatee, Ronaldo ayaa maalmaha soo socda gaadhi doona magaalada Turin oo uu kaga biiri doono kooxdiisa cusub oo uu u raaci doono safarka ciyaareed ee ay ku tegayso Maraykanka.